China Mason Jar Vase fekitori nevatengesi | Zvakanakisa
Hapana chimwe chinonyanya kujairika kuisa chikafu chako mu500ml Glass Mason Jar! Inoshandiswa kweanopfuura makore zana, iyo mason jar inochengeterwa yakachengetedza akasiyana ezvigadzirwa zvekudya kusanganisira jamu, kuchengetedza, mapiki, chutneys, vhiniga ... nezvimwe zvakawanda!
Iyi nyowani yekugadzira mason jar inoshandiswa sevaseti iri kuwedzera kukurumbira.
1. Iyo inoshamisa inoshamisa yakagadzirwa ruoko mbichana!
2. Iko kwekunze kwejarini kwakapendwa uye kutambudzika. Mukati memidziyo haina kupendwa.
3. Inounza Classic Nyika Charm mune Simply Chic Mason Jar Dhiza kune Chero Kwekushongedza Kwekugara.
4. Maruva haana kuisirwa mumutengo wejangi.
5. Ukuru uye huwandu huri kumusoro kwekugadziriswa kwemutengi.
6. Yakawanda-ruvara rwependi sarudzo.
7. Screw-cap uye huswa tambo yekushongedza vase.
8. Shandisa mumabiko / pamba kushongedza / chipo., Nezvimwe.
Nezve Kambani Yangu
Isu taive nehunyanzvi fekitori inogadzira mabhodhoro akanakisa muChina!
Isu tinovimbisa vese vatengi vangu vanogashira pakeji yavo zvakachengeteka mune yakanaka mamiriro uye yakanaka mhando yezvinhu.
Kukurumidza kutumira iwe unogona kuwana mapasuru nekukurumidza sezvinobvira mushure mekuraira kusimbiswa.
Yepfuura: Girazi Deco Wine Bhodhoro Yevaseji
Inotevera: Multi-color Mason Jar Mug
Yakaomeswa Mwoyo-yakajeka Girazi Kenduru Kubata
Akanyoroveswa Wavy Ratidza Pfupi Girazi Candle Holder
Girazi Reagent Vase A